Sawirro: Isbitaalka Alnuur oo boqolaal qof oo danyar ah indhaha ugu fiiqay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Isbitaalka Alnuur oo boqolaal qof oo danyar ah indhaha ugu fiiqay Muqdisho
16th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Xarunta Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad ka socda howlo isugu jira, baaritaano, daweyn iyo indho-fiiqid bilaash ah oo loo sameynayo kumanaan qof oo danyar ah.
“Sida aad arkeysaanba waxaa Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ka socda howlo isugu jira, baaritaan, daweyn iyo indho fiiqis samafal ah oo soo socday illaa bishii hore, maalintii labaadna lagu guda jiro howshii qaliinka” ayuu yiri agaasimaha.
Dr. Dalmar ayaa intaa raaciyey in hirgelinta mashruucan samafalka ah ay iska kaashadeen heyadda Al-Basar Foundation ee dalka Sacuudiga oo ay ka socdaan dhaqaatiir ajnabi ah iyo isbitaalka Indhaha Al-Nuur, waxaana gacan ka geystay ayuu yiri Wakaalada muslimiinta Afrika (African Muslim Agency).
“Waxaa mashruucan ka faa’iideystay dad gaaraya 6,420 qof oo loo sameeyey baaritaan iyo daweyn bilaash ah waxaana qaliin dhinaca Indhaha uu u soo baxay 530 qof, kuwaasoo qeybtoodii ugu horeysay oo ka kooban 91 qof shalay loo sameeyey qaliin, waxaa dhiman 420 qof oo maalmaha soo socda indhaha loo fiiqi doono” ayuu intaa ku daray Dr. Dalmar.
Agaasimaha Isbitaalka Al-Nuur. Dr. Dalmar ayaa xusay in mashruucan samafalka ah uusan aheyn kii ugu horeeyey ee ay Muqdisho ka sameeyaan, wuxuuna tilmaamay in todobaadka soo socda isaga iyo kooxda la socota ay ku wajahan yihiin degaano ka tirsan gobolada dhexe ee dalka si ay u gaarsiiyaan mashruucan samafalka ah.
Wuxuu u mahad celiyey dhamaan heyadaha ka qeyb qaadanaya mashruucan, shaqaalaha Isbitaalka Al-Nuur iyo intii kale ee gacanta ka geysatay fududeynta howshan samafalka ah.
Dr. Faqrudiin oo hogaaminayey dhaqaatiirta ka socotay heyadda Al-basar ee dalka Sacuudiga oo isna saxaafada la hadlay ayaa sheegay in Somalia ay ka mid tahay dalalka ugu badan caalamka ee indha la’aantu ay ka jirto sidaas awgeedna ay u doorteen iney ka qeyb qaataan fulinta mashaariicda noocan ah ee laga sameynayo.
Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ah ee sida bilaashka ah uga faa’iideystay mashruucan samafalka ah ayaa sheegay in loo sameeyey daweyn iyo qaliimo ay u baahnaayeen indhahooda, aysana jirin wax qarash ah oo laga qaaday, iyagoo u mahad celiyey maamulka isbitaalka indhaha Al-Nuur iyo heyadihii kale ee gacanta ka geystay howshan.
Mashquul fara badan ayaa maalmahan laga dareemayey Isbitaalka Indhaha Al-Nuur, iyadoo ay soo buuxiyeen dad u badan kuwo da’ah oo isugu jiray rag iyo haween kuwaasoo loo sameynayey qaliimo bilaash ah, iyadoo shaqaalaha isbitaalkana ay wadeen howlo ay ku baxnaaninayaan kuwa indhaha loo qalo, kuna diyaarinayaan bukaanada qaliinka loo wado.